“U dul qaadan mayno in dad Dan Gaara lihi ay masiirka Ummadda Lunsadaan” | Somaliland.Org
“U dul qaadan mayno in dad Dan Gaara lihi ay masiirka Ummadda Lunsadaan”
November 26, 2009	Marxaladda dalkeenu maanta marayo waxa ka xun tan dadkeena haysata, SNM waxay ka dhalatay kacdoonkii ay dadkeenu ku diidanayeen dulmiga xaqdarrada iyo musuqmaasaqa, waata dhalisay in SNM burburiso dawladdii la odhan jiray Somaliya. SNM umaysoo dagaalamin in ummadda reer Somaliland xalaashato xaqdarrida, xaaraanta iyo musuqmaasaqa. Maanta waxa muuqata in dadkii reer Somaliland u gaadideen xaqdarrida iyo xaaraanta oo aad moodid in damiirki ka dhintay, markaa waa in dadku fahmaa in dalkan ay leeyihiin oo aanay u dulqaadanin xaqdarrida iyo dhaliisha xukuumadda ee wiiqaysa jiritaankooda. Xukuumadda manta joogtaa dantii dalka iyo tii shacabkaba waxay ka doorbiday in ay mar kale doorashada ku guuleysato, shacabkii reer Somaliland ee isku midka ahaa waxay u qaybiyeen gobolo ku salaysan qabyaalad oo beelkasta gobol ayey u magacaabeen markaasey sii kala qaybiyeen oo hadana qabil-qabiil ugu kala magacaabeen degmooyin, xeerkii dalka u yaalay xukuumaddani way jebisay oo waxay baalmartay sharcigii fasxayey magacaabista Gobolka iyo degmada iyagoo ummaddii u kala qaybiyey qabyaalad oo iska horkeenay si ay ugu suurtowdo iney doorashada helaan.
Marka Xukuumadda la yidhaahdo maxaad wax u qaban weydeen waxay ku jawaabaan ley nama ictiraafin oo dadkii waxay fahamsiiyeen in ictiraafku debedda ka imanayo, xaqiiqdu waxa weeye marka aynu inagu is istiraafno ayeynu ictiraaf heleynaa Ictiraafka waa la shaqaystaa waxa la muujiyaa wax qabadkaaga, wax soo saarkaaga, maamul wanaaga iyo cadaaladda iyo dawladnimo dalkeeda hanan karta. Ninka kubadda ciyaara ee muctarifka ah leyskama ictiraafo ee isaga iyaa is muujiya inuu laacib kubadda yaqaana yahay markaas ayaa la ictiraafaa. Markaa iciraafku inaga ayey inagu xidhantahay ee ay aynu wax qabsano dulmigana diidno Xukuumaddan fadhiidka ahna iska bedelno.
Waxa dhacday in Xukuumaddu u samaysay xus balaadhan oo lagu maamuusayey dhacdadii foosha xumayd ee qarankeena lagu wiiqayey ee 29kii Oktoobar 2008 ka dhacday Caasimadda Somaliland, kaasoo sababay khasaare ballaadhan oo naf iyo maalba leh
Sida laga warqabo xuskan 29 OCT. waxa uu kusoo beegmay 12 Maalmood ka dib markii dalka laga xusay Sanad-guuradii 25-aad ee kasoo wareegtay Maalintii Shuhadada SNM oo loo asteeyey amintii 17 October 1984 oo ahayd maalintii uu dagaalka adagi tuulada Burco-duurey ku dhexmaray Mujaahidiintii SNM iyo Ciidamadii Afweyne, isla markaana ay ku shahiideen 27 Sarkaal oo ka mid ahaa hormoodkii halgankii xaq-u-dirirka ahaa, kuwaasoo aynu ka xusi karno halgamaagii weynaa ee Mujaahid Maxamed Xaashi Lixle, maalintaas oo loo cayimay in si mideysan loogu baroor-diiqo dhamaan Mujaahidiintii ku shahiiday halgankii dalka lagaga xoreynayey nidaamkii keli-gii taliyaha ahaa iyo intii kale shicibka ahayd ee taliskaasi sabab la’aan u xasuuqay xiligii uu halganku socday. iyadoo midhihii ka dhashay halgankii ay ku heshiideen Mujaahidiintii SNM in dadkooga helaan nidaam ku dhisan Cadaalad iyo sinaan, sharcigu ka sareeyo hoggaamiyaha.
17/10/1984 waxay ahayd maalin weyn oo bar-bilow iyo ceelaalo u ahayd baadi-doonka dhismaha haykalka Dawlad-nimo ee Somaliland iyo Calanka aynu hadhsanayno. Sidaa daraadeed waxa marag-madoon ah inay horsed u tahay maalmaha taariikhiga ah ee Goleyaasha Qaranka iyo qeybaha bulshada ka mudan inay si ballaadhan u agaasimaan weynayntooda iyo xusidooda.
Mujaahidiintii u shahiiday dhalashada Smaliland, ayaa waxa wax lala yaabo ahayd in xukuumaddii dheefsatay midhahoogii aanay tixgelinteedii iyo mudnaanteedii siin maalintan, isla markaana aanay ka soo qeybgelin xuskeeda, marka laga reebo wasiirka ay aqoonta bidaan oo aan hadalkiisii ka xasuusto kelmed taas oo ahayd “Dawalad Curdina ayeynu nahay” waxa is weydiin leh wasiirkan oo 18 sano wasiir ka ahaa Somaliland aqoontiisu goorma ayey curdinka ka koreysa?.
Qof kastaa wuu noqon karaa muxaafid ama mucaarid laakiin mucaaradnimadu yaanay noqon sidan labada Xusbi ee mucaaradka ah ee mucaaradnimadoodu tahay qaran dumiska iyo been abuurka, mucaaradnimadu waa inay noqotaa mid tilmaamaysa dhaliilaha xukuumadda iyo sida loo saxayo.
Gudida komishinka doorashooyinka ee cusub waxaanu leenahay xafiiskaas waxa ku maqan dhaliilo fara badan ee haddaad bilaa xisaab kula wareegtaan idinka ayaanu idinkala xisaabtamaynaa.
waxaanu dadweynaha reer Somaliland ugu baaqaynaa ineynu isbedel samayno oo aynu u soo jeesano dhismaha dalkeena iyo xukuumad xalaala oo ina hanan karta hantidadleena iyo jiritaankeena oo aynu ku dhaqnnaa Dastuurkii (Constitution) aynu samaysanay.
XOG-HAYAHA GUUD EE URUR-SIYAASADEEDKA UDHIS
MD: AXMED MAXAMED JAWHARI